Mpiasa 337 No Safotra Tao Amin’ny Orinasa Fanenonan-Damba Tao Kambodza Tamin’ny Herinandro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Avrily 2014 3:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Ελληνικά, Svenska, Italiano, Français, čeština , 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
Voatatitra fa nisy telo andro maro ny mpiasa safotra tany amin'ny orinasa mpanao lamba tao Kambodza tamin'ny herinandro voalohany tamin'ny volana avrily. Tao an-drenivohitry ny firenena Phnom Penh, mpiasa 337, vehivavy ny ankamaroany, no nalefa hokarakaraina tany amin'ny toera-pitsaboana efatra samihafa.
Efa niahiahy tamin'ny voalohany ny vondrona sendikà fa “rano sy sakafo tsy ara-pahasalamana sy ny fofon'akora” no niteraka ny fahatoranana teo amin'ny mpiasa. Efa nisy nitatitra hatrany ny fahatoranana faobe sy ampangaina ho anisan'ny milaza ny maharatsy ny toetry ny asa ao anatin'ny orinasa.
Tamin'ny desambra lasa teo, efa nangataka tamin'ny governemanta ireo mpiasan'ny fanaovan-damba ireo hampakarana ny karama ambany indrindra $80 ho $160. Saingy nanambara ny governemanta fa fisondrotana $15-$20 ihany no zakan'ny toekarena. Ho setrin'izany dia nanao fitokonana nanerana ny firenena ireo sendikan'ny fanaovan-damba saingy naparitaky ny polisy tamin-kerisetra tamin'ny Janoary.
Nampifandraisin'ny Ivontoeran'ny Fikambanana Manofana Momba Ny Lalàna (Sosialy) ho mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny sakafo sy ny hakelin'ny karaman'ny mpiasan'ny fanaovana akanjo ireny fahatoranana ireny. Manasa ireo marika manerantany ny vondrona hanatsara ny fampitaovana ireo mpiasany:
Nanoro hevitra ny governemanta ihany koa ny vondrona mba hampakatra ny karaman'ny mpiasa: